Amasu okulwa nobushokobezi kanye ne-countermeasure
Eminyakeni yamuva nje, isimo se-antitherrorism samazwe aphesheya siya ngokuya siyinkimbinkimbi futhi sifuna, eduzane naseParis, eFrance, sinokudubula kwamabhomu, ...
Eminyakeni yamuva nje, isimo se-antitherrorism samazwe omhlaba siyenzeka ngokwengeziwe futhi sifuna, eduzane naseParis, eFrance, sinokubulawa kwamabhomu okudubula, izifundazwe zase-United States zishayelwa imicimbi emi-11 Septhemba. Ukuhlasela kwamaphekula komhlaba wonke, lapho kwenzeka le ngozi, ukuphepha komphakathi, ubuphekula buye baba ukugxila kokunakwa komhlaba wonke.
Impi yokuqala ye-antiterrorism yahlukaniswa amaphekula, inkundla yempi isesibili ayizange iboshwe ngokuhlasela kwamaphekula ukubalawule. Kudingeka ikhamera ngobuchwepheshe bokuqashelwa kobuso ukuthi bathwebule izici zobuso ezicacile zokwenza imininingwane emikhulu kanye nohlu olungaziwa kakhulu ngemuva kokuzivikela ekungeneni kwezehlakalo zamaphekula.
Ubuchwepheshe Bokuqashelwa Kobuso bususelwa kumuntu'Izici zobuso, isithombe sobuso noma okokugcina kwevidiyo. Okokuqala, bonisa ukuthi ngabe kunobuso yini, uma kunobuso bomuntu, kunikezwe futhi isikhundla ngasinye sobuso, usayizi, kanye nakulo nalunye izitho zolwazi ezinkulu zobuso. Futhi ngokususelwa kulolu lwazi, ubunikazi bokukhishwa okuthe xaxa okuvezwe ebusweni, nobuso obaziwayo buqhathaniswa ukukhomba ubunikazi bobuso obubodwa.
Uhlelo lokuqashelwa kobuso be-Facidelien Face Wompact empeleni luhlanganisa ukwakha uchungechunge lobuchwepheshe obuhlobene, kufaka phakathi ukutholakala kwesithombe sobuso, indawo yobuso, ukubonwa kobuso, ukukhonjwa kanye nobunikazi obukhona; Futhi ikakhulukazi ngobuso bokuqashelwa kobuso obuncane bokuhlonza noma ubuchwepheshe bokubheka ubuchopho noma amasistimu.
Mayelana nokulwa nobuphekula, kufanele sigxile ekuvinjelweni. Okokuqala, kufanele siqinise ukuqwashisa ngezokuphepha kwezakhamizi futhi siqinise ukubhekwa empilweni ejwayelekile, qaphela. Abantu abasolisayo kufanele babikwe ngokushesha eminyangweni kanye nosizo olufanele, lapho ukuhlaselwa kwamaphekula kuthule ebusweni, masinyane kufonele amaphoyisa ekuqinisekiseni ukuphepha.
PHAMBI Ikhamera ye-IP- indlela engabizi futhi ephumelelayo yokuqapha izakhiwo zakho!
Ngemuva kokuzola kwengqungquthela ye-G20 OLANDELAYO